टाङटिङ पुल पनि अधुरै « Loktantrapost
टाङटिङ पुल पनि अधुरै
१ कार्तिक २०७३, सोमबार २३:१२
विकासमा हेपिएका कारण ‘झापाको डोल्पा’ भन्ने उपमा पाएको खुदुनावारीका वासिन्दाका धेरै दुःख र सास्तीका कथा व्यथा छन् । जङ्गली हात्तीको त्रास छ, पिउने पानीको हाहाकार छँदैछ । तर सबैभन्दा बढी सास्ती उनीहरूले टाङटिङ खोलामा पुल नहुँदा खेप्दै आएका छन् । बर्खामा खोलो उर्लिदा हप्तौँसम्म स्थानीयले बन्दी जस्तो अनुभूति गर्छन् । उत्तर जाँदा इलामको पहाड र दक्षिण झर्दा टाङटिङको छेकवार । दशकौदेखि उनीहरू यस्तो दुर्दसा भोग्न अभिषप्त छन् ।
मध्य दसैँमा दुनियाँ रुवाउने गरी महमाइ र दानावारीको माइखोलामा भएको डुङ्गा दुर्घटनाले खुदुनावारीवासीलाई पनि तर्साएको छ । कुनैदिन यता पनि माइखोलाकै जस्तो दुर्घटना त निम्तिने होइन ? दिनहुँ यात्रुवाहक वस र ट्याक्सी दोहोरीलत्ता चल्छन् । पुल नहुँदा बाढीको भेलले बगाउने हो कि खाल्डोमा पल्टिने हो भन्ने त्रास बोकेर यात्रु र चालकहरू डराउने गर्छन् ।
विरिङमा पुल बनेपछि हौसिएका खुदुनावारीबासीले टाङटिङको दुःख हरण हुन अझै केही वर्ष पर्खनु पर्ने भएको छ ।
माइखोलामा जस्तै टाङटिङमा पनि पक्की पुल बनाउन थालिएको एक दशक पुग्न लागिसक्यो । साठीको दशकपछि पुल निर्माणको पहिलो ठेक्का लागेको थियो । तर २०६८ सालमा १६ वटामध्ये ८ वटा पिल्लर बनेपछि निर्माण रोकिएको टाङटिङ पुलको अधुरो काम बर्षौसम्म अलपत्र पर्यो । खुदुनावारीबासीले अधुरो पुललाई जोडेर बाँसको पुल बनाएर काम चलाए ।
‘जनताले यो पुल अधुरो हुँदा सबैभन्दा बढी गुनासो मसँग गरेका छन्’
किन बनेन ?
सो क्षेत्रका सांसद प्रेमबहादुर गिरीका अनुसार सुरुमा ‘बक्स कज्वे’ भनेर टेन्डर लागेको टाङटिङ पुललाई डिभिजन सडक कार्यालय दमकका तत्कालीन डीइ (प्रमुख)ले मौखिक आदेशका भरमा ठेकेदारलाई कज्वेको साटो पुलकै काम गर्न लगाएका कारण निर्माणमा बजेट अभाव भएर पुल अलपत्र भएको हो ।
सरोज निर्माण सेवाले करीव अढाइ करोडमा पुलका ९ वटा पिलरमा स्ल्याव हालिसकेको छ । तर बाँकी पिलरमा स्ल्याव हालेर पुललाई सम्पन्न गर्न नयाँ ठेक्का लगाउनु परेको सांसद गिरी बताउँछन् ।
दमकस्थित डिभिजन सडक कार्यालयले पनि बजेट अभावका कारण एउटै पुल निर्माण गर्न दुई पल्ट ठेक्का लगाउनु परेको स्वीकार गरेको छ ।
कज्वेलाई छुट्याइएको बजेटले पुल बनाउने खर्च नपुगेको कुरा सुरुमा सडक कार्यालय र निर्माण कम्पनीले गुपचुप राखेका थिए ।
तत्कालीन डिभिजन प्रमुखले थप बजेट निकासा गराउने भनी दिएको आश्वासन पूरा गर्न नसकेपछि पुल अधुरै रह्यो । त्यसबेला डिभिजन र निर्माण कम्पनीविच भुक्तानीको विवाद झन्डै अदालत पुगेको थियो । तर विवाद मिलेपछि पुलको नयाँ ठेक्का लागेको छ ।
नयाँ ठेक्का पुरानै कम्पनीलाई
आगामी दुई वर्षमा बाँकी काम सक्ने शर्तमा पुलको नयाँ ठेक्का पुरानै निर्माण कम्पनी सरोज निर्माण सेवाले पाएको छ ।
सवा दुई करोडमा पुलको ठेक्का सम्बन्धी सम्झौता गत असारमा सम्पन्न भइसकेको र तिहारपछि निर्माण कार्य द्रुत गतिमा हुने डिभिजन सडक कार्यालयको दावी छ ।
‘जनताले यो पुल अधुरो हुँदा सबैभन्दा बढी गुनासो मसँग गरेका छन्’, सांसद गिरी पनि अब चाहिँ पुलको काममा धोका नहुने आशा गर्दै भन्छन्–‘टाङटिङ पुललाई जसरी पनि पूर्ण बनाउने मेरो प्राथमिकता छ ।’
जनताले छिटोभन्दा छिटो पुलबाट सुरक्षित यात्रा गर्न पाउनु पर्यो ।
पुल निर्माणमा विलम्ब भएकोमा खुदुनावारीवासी चिन्तित छन् । सोही क्षेत्रका बासिन्दा समेत रहेका नयाँ शक्ति नेपालका झापा अध्यक्ष कुमार क्षेत्रीले स्थानीय पत्रपत्रिकामा धेरै पटक पुल निर्माणमा भइरहेको विलम्ब र स्थानीयवासीको सकसका विषयमा लेख प्रकाशित गरेका थिए । पुल नहुनको पीडाका सम्बन्धमा राष्ट्रिय स्तरको समाचार बन्यो । तर पुल लामो अवधिसम्म अधुरो अवस्थामै रह्यो ।
डिभिजन सडक कार्यालय दमकका प्रमुख डीइ राजेन्द्र साह अब अधुरो पुलको निर्माण ठेक्का लागिसकेका कारण काम सम्पन्न हुने विश्वास दिलाउँछन् ।
‘आधा पुलको निर्माण अर्कै टेन्डरबाट भएको थियो, अब बाँकी काम नयाँ टेन्डरबाट बन्ने टुङ्गो लागिसकेको छ’–डीइ साहको भनाइ छ ।
‘टाङटिङको पुल खुदुनावारीको लाइफलाइन हो’, ग्रामीण पत्रकारितामा रुचि राख्ने यलम्बर टाइम्सका प्रधान सम्पादक दिपीन राई पुलको निर्माणमा बिलम्ब गर्न नहुने सुझाव राख्दै भन्छन्–‘उत्तरी क्षेत्रले विकासप्रेमी सांसद र मन्त्री पनि पाएको यो बेला जनताले छिटोभन्दा छिटो पुलबाट सुरक्षित यात्रा गर्न पाउनु पर्यो ।’
(लोकतन्त्र पोस्टमा २०७३ कार्तिक १ गते प्रकाशित)